भक्तपुरमा बोक्सीको आरोपमा एक महिलामाथि कुटपिट — Bhaktapurpost.com
भक्तपुरमा बोक्सीको आरोपमा एक महिलामाथि कुटपिट
अनिल फोजू / भक्तपुर पोस्टभक्तपुर, १३ जेठ २०७८ विहिबार
भक्तपुर, १३ जेठ २०७८ विहिबार
बोक्सी आरोपमा भक्तपुरमा एक महिलालाई निर्घात कुटपिट गरिएको छ । मध्यपुर थिमी नगरपालिका वडा नम्वर १ लोकन्थली स्थित मनोहरा बस्तीमा एक महिला माथि बोक्सी आरोपमा कुटपिट भएको हो ।
करिब ४५ वर्षकी मुना खनाललाई एक समुहले बोक्सीको आरोपमा कुटपिट गरेको पीडितले भक्तपुर पोस्टलाई बताइन् । भक्तपुरको मनोहरा संगैको सुकुम्बासी बस्तीमा बस्दै आइरहेकी मुना सामान्य झारफुकको काम र ज्याला मजदुरी गर्ने काम गर्छिन् । आफूले झारफुक गर्दै आइकी मुना खनालले बताइ न् । सोही कारण आफूलाई बोक्सी आरोप लगाइदै कुटपिट भएको तर, प्रहरीले पीडकलाई पक्राउ नगरेको उनको भनाइ छ ।
यस्तो छ घटनाको विवरण
घटना गत शनिवार साँझको हो । सब्जी खरिद गर्न भनि मुना खनाल बजार गरिरहेकी थिइन् । अचानक फूलमायाको घरबाट फोन आउछ । फोन आएपछि मुना विरामीलाई भेत्न फूलमायाको घरमा जान्छिन् । उनी फूलमायाको घरमा पुगेपछि सामान्य झारफुक गर्न थाल्छिन् । केहि समय पछि हामी ‘जय नारी महिला समूह’का हौ भन्दै एक हुल फुलमायाको घरभित्र पस्छन् । त्यसपछि ती समुहले तै हैनस झाँक्री बोक्सी भन्दै मुना खनालमाथि कुटपिट गर्न थाल्छन् । यता विरामी फुलमाया लगायतले ‘मेरो घर भित्र आउने तिमीहरु को ?’भनेर ती समुहलाई बाहिर निकाल्छिन् । बाहिर निकालेपनि बाहिर बसेका उनीहरु जादैनन् ।
यता, मुना घर भित्रबाट नै प्रहरीलाई फोन गछिन् । फोन गर्न लगतै प्रहरी पनि आइपुग्छ । प्रहरी आएपछि मुनाको सास उठेर आउछ र प्रहरीले बन्द ढोका खोल्न लगाउँछ । मुना बाहिर मात्र के निस्कन्छिन प्रहरीकै सामुन्नेमा नै उनलाई लातै लाताले बाहिर बसेकाहरुले कुटपिट गर्छन । मुना खनाललाई बोक्सीको आरोप लगाउँदै एलिसा ठकुरी, सुरेस तामाङ, राधिका मगर , अनिल आलेमगर, लक्ष्मी, माया, टाइचे नाम गरेकी महिला, सुमन माझी, एलेन्द्र तामाङ, गंगा गुरुङ्ग लगायतका अन्य व्यक्तिहरुले निर्घात कुटपिट गर्छन । सुरक्षा र न्यायको लागि मुना प्रहरी वृत्त ठिमीमा पनि पुग्छिन । उता न्याय नपाएछि उनी पुन आफ्नो घर तर्फ लाग्छिन ।
के भन्छन स्थानीय
यस्तै सुकुम्बासी बस्तीमा नै बस्दै आएका टेकनाथ सापकोटाले पनि निमुखा भएका कारण खनाल माथी आक्रमण भएको बताउँछन् । उनीलाई आज आक्रमण गर्नेले अरुलाई पनि यस्तै आरोप लगाउँदै आक्रमण गर्न सक्ने उनले सुनाए । कसैलाई बोक्सी आरोप लगाएर यसरी यातना दिन मिल्छ ? उनले थपे । यो सरासर निमुखा माथी दमन गर्न खोजिएको हो । फुलमाया भन्ने विमारी भएको सबैलाई थाहा थियो । उनी लड्दै उफ्रिदै हिड्ने गरेका कारण उनी खनालकोमा झारफुक गर्न आएको सबैलाई थाहा छ । खनालले झारफुक गरेपनि अस्पताल पनि जान उनलाई आग्रह गरेकी थिईन तर, उनका बुबाले केही महिलाहरुलाई जम्मा पारेर उल्टै बोक्सीको आरोप लगाउँदै कुटपिट गरेको सापकोटाले बताए । सुरक्षाकर्मीकै अगाडी यसरी कुटपिट हुँदा पनि कसैले पनि उनीलाई न्याय नदिएको उनले बताए । पिडित महिला आफूलाई केटा मान्छेले नै यस्तो दुरव्यवहार गरी कुटपिट गर्दा पनि न्याय नपाएको उनले सुनाईन ।
मुनाले आफुमाथि भएको घटनाको विषयमा न्याय मागिन्
आफूमाथी न्याय नभए आफू विष खाएर मर्न बाध्य हुने उनले सुनाईन् । ”भएको एक्लो छोरोलाई पनि बस्तीमा पसे मात्र पनि मार्ने धम्की दिएका छन् । आफू एकजना अर्को मान्छे नभए सुत्न बस्न सम्म पनि सक्दिन, दिशा पिसाव ओछ्यानमा नै गर्न बाध्य भएकी छु ।” उनले भनिन । आफूलाई न्याय चाहिएको उनले सुनाइन । उनका अनुसार सावित्री सुवेदीको आडमा मलाई बोक्सी बनाई उनीहरुले कुटपिट गरेको उनले बताइन् । म कसरी बोक्सी भएँ बोक्सी भनेको के हो मलाई थाहा नभएको उनी बताउँछिन् ।
अहिले मुनाको अवस्था कस्तो छ ?
पिडित मुनाको टाउको काँध, ढाड, कम्वर र खुट्टामा चोट तथा निलडाम रहेको छ । उनलाई केटा मान्छेहरुले नै लातै लाता र मुक्काले हानेका कारण उनको मुन्टो नै घुमाउन नमिल्ने भएको छ । कुटपिटबाट सख्त घाइते भएकी उनी हाल घरमा नै रहेकी छन् । शरीरभरी निलडाम भएकी उनी आफ्नो मुन्टो चलाउन पनि नसक्ने अवस्थामा छिन् । उनीलाई हाल दुई जनाले बसाई दिन र सुताई दिनु पर्ने अवस्था रहेको छ । तथापी उपचारका लागि किन अस्पताल जनु भएन भन्दा उनी भन्छिन् भएको पैसा र मोवाईल शनिवार कुटपिट गर्दा खल्तीबाट कसले झिकिदियो थाह छैन अव के पैसाले यो महामारीमा उपचार गर्न जानु भन्दै उनी हाल घरमा नै दुखाई कमि गर्ने औषधी खाएर बसेको बताउँछिन् ।
को हो जय नारी समुह
उक्त वस्तीमा राजनीतिक गुतको सन्जालमा होडबाजी चलेको छ । कहिब ८ सय देखि १२ सय सम्म भोट भएको उक्त ठाउँमा राजनीतिक रुपमा पनि दलहरु समूह बनाउन व्यस्त छन् । त्यस्तो अर्काे एक रुप हो जय नारी समुह । जय नारी समुह हाललाई कुन पाटीको हो त्यो नखुलेपनि अन्तत यो बस्तीमा आफ्नो पहुँज बनाउन सक्रिय छ । उक्त बस्तीमा जय नारी समुहलाई सावित्री सुवेदी (जो एक अभियन्ताको रुपमा समेत परिचित छिन् ) ले पचास भन्दा बढी महिलाहरु जम्मा गरेर गठन गरेकी बताइएको छ ।
त्यहि समुहले पहिले देखि कुटपिट गरेको खुलासा
अहिले मुनालाई कुटपिट गरेको समुहले पहिले पनि कुटपिट गरेको स्थानीय व्यक्तिले जानकारी गराए । उनलाई ज्यान मार्ने समेत धम्कि आएको स्थानीय प्रत्यक्षदर्शीले पुष्टि गरे । यो वर्ष पनि उनीहरुले कुटपिट गरे, मार्ने नै उद्देश्य रहेछ । त्यस समयमा अरु मानिस पनि घटना स्थलमा जम्मा भएका कारण खनालको ज्यान भने जोगिएको स्थानीयहरुले बताए ।
(पिडित र स्थानीयसंगको कुराकानीमा आधारित रिपोर्ट )
भक्तपुरका सफल व्यक्तित्वको रुपमा रहेका विश्वराम कवांको जीवन यात्रा सार्वजनिक